काठमाडौं भेटिएकी करोडपतिकी पत्नी भन्छिन्, श्रीमानले मेरा इच्छा पुरा गरेनन् – Sapana Sanjal
April 23, 2021 285
Sapana Sanjal : महानगरीय प्रहरीले काठमाडौंमा अव्यवस्थित रूपमा खोलिएका केही क्याबिन रेस्टुराँ, मसाज र डान्स बारबाट यौ’नज’न्य गतिविधिमा सं’लग्न भएको आरोपमा ४० जना महिलालाई पक्राउ गरेको रहेछ।
तीमध्ये अधिकांशको आआफ्नै दुस्ख थियो, द’र्द थियो। सबै चिन्तित अनुहारमा थिए। उनीहरू भन्दै थिए, ‘वैकल्पिक बाटो भइदिए हामी तुरुन्तै यो पेसा परिवर्तन गर्न तयार छौं।’ तर
एउटी अन्दाजी ४० देखि ४५ वर्षकी लाग्ने महिलाको कुराकानी, उनको हाउभाउ र बोल्ने शैली बेग्लै थियो। कुरा गर्ने पालो आएदेखि नै उनी मुख खु’म्च्याउँदै बोल्दै थिइन्।
उनको भित्री कुरा सुन्दा म पनि छक्क परेँ। उनले मलाई यसो भनिन्, ‘तपाईं पत्याउनुहुन्न होला, म मारवाडी परिवारकी सदस्य हुँ। मेरो श्रीमान् ठूलो व्यापारी छन्।
उनी व्यापारकै सिलसिलामा कहिले भारत, कहिले चीन र कहिले थाइल्यान्ड पुगिरहन्छन्। उनी प्रायस् घरबाहिर भइरहन्छन्।
यो कुरा मेरो श्रीमान्ले बुझिदिएनन्। पैसाका लागि होइन, शा’रीरि’क आवश्यकता पूरा गर्न म’साज पार्लर खोलेकी हुँ मैले। त्यहाँ आउने ग्रा,हक चित्तबुझ्दो छन् भने म आफैं यौ’ ‘नस’म्ब’न्धका लागि तयार हुन्छु। म यसैमा खुसी छु। यसमा अरूको टा’उको दु’ख्नुपर्ने किन?
Nextअस्पताल गएकी २५ वर्षीया महिलालाई डाक्टरले हेर्नुपर्ने एकतिर अर्को तिर खो’लेर हेर्न खोजेपछि….
ओलीले वामदेवलाई भने, ‘पार्टी एकताको जिम्मेवारी अब तपाईले सम्हाल्नुस्’